कसको शक्ति, कसको भक्ति « Jana Aastha News Online
कसको शक्ति, कसको भक्ति
प्रकाशित मिति : ३१ चैत्र २०७३, बिहीबार ०९:११
राम्रै तयारीसाथ धुमधामसँग पार्टी घोषणा गरेका डा. बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टी अब कसरी पनि सकिँदै छ भने चुनाव आयो तर पैसा छैन । मुठ्ठीदानको भरमा खर्च चलाउनुपर्ने अवस्था छ । सक्ने र हुनेहरूले १५ लाखसम्म पनि शुरुमै हालेका हुन् ।
तर, त्यो अहिलेसम्म आइपुग्दा सकिएको छ । केही साताअघि पार्टीको निर्णय सुनाउने क्रममा डा. भट्टराईले नै भनेका थिए, ‘आर्थिक रूपमा कमजोर छौं ।’ लगभग ७० लाख आम्दानी भएकोमा ६४ लाख खर्च भइसकेको तथ्यांक उनले पस्केका थिए । केन्द्रीय भेलामा प्रतिव्यक्ति एक हजार संकलन गरेर त्यहाँबाट जम्मा २ लाख जति बचाउनुपर्ने स्थितिमा नयाँ शक्ति पार्टी छ । अब कसरी र कति दिन चल्ला ? शैली कम्युनिस्टको, सिद्धान्त अर्कै भएपछि लेबीको भरमा मात्र खर्च धानिने कुरा पनि भएन । त्यसबाहेक उमेरहद ७० वर्ष तोक्नाले समेत नयाँ शक्तिलाई नोक्सान नै गर्ने देखिएको छ । ओखलढुंगाका पुराना कांग्रेस नेता महेश कर्मोचाले त्यही भएर ७० वर्ष पुग्न ३ महिना बाँकी छँदै नयाँ छाडेका छन् । उता, अख्तियारले डाम्नेबित्तिकै सशस्त्रका पूर्वआइजिपी ऋषभदेव भट्टराई पनि खतरामा परे ।
नयाँ शक्तिले यसरी फौजदारी आरोप लाग्नेबित्तिकै पार्टीबाट निलम्बन राख्ने नीति नै लिएको छ । उता, पूर्वमा छिरिङ शेर्पाका बाउछोरा घुस रकमसहित पक्राउ परे, तिनलाई पनि नयाँ शक्तिले कारबाही ग¥यो, आखिर फोरममा छिरे । यो सबै देखेपछि अहिले के चर्चा चल्न थालेको छ भने नेपाली समाजलाई नसुहाउने खालको यही अवैज्ञानिक विधिले यो पार्टी सकिने भो ! पार्टी बनाउँदा चारैतिरबाट बटुलेका मान्छे अहिले भटाभट बाहिरिँदै छन् । नयाँ पस्ने क्रम छैन, कडिकडाउ नियम कानुन देखेपछि त्यसै पनि पार्टी बदल्दै हिँड्नेहरू छिर्न डराउने नै भए । विजातीय एकता गर्ने भन्दै उपेन्द्र यादवको फोरमसँग वैशाख पहिलो साता एकीकरणको तयारी भइरहेको छ । हेरौं, फोरमबाट त्यता छिरेकाहरू कति टिक्छन्, बाबुरामको पार्टीमा ! त्यसो त यसअघि त्यहाँ बसेर कचकच गरिरहेका निर्मल भट्टराई, मुमाराम खनाल, रामेश्वर खनालहरूले पनि पार्टी छाडिसकेका छन् ।